Date My Pet » 6 Zvikonzero Sei Good Health Akanaka For Relationships
6 Zvikonzero Sei Good Health Akanaka For Relationships
Last updated: Nov. 22 2020 | 2 Maminitsi verenga
Ralph Waldo Emerson kamwe waiti, "Health mukurusa upfumi."
asi munyama, kure zvakawanda vedu vari kushanda pane imwe "dhefisiti."
Mhosva pamusoro makombiyuta uye zvikuru ndakagara mararamiro; Kunwa zvokudya restaurants nokuda shinaira purogiramu; kana kungoti kushaya ruzivo maererano tsika utano.
Funga zvinotevera nhamba:
Maererano CNN.COM, kufutisa pakati vakuru muna America yakapetwa kaviri pakati 1990 uye 2010.
Annual kurapwa mari kufutisa pfuura $140 bhiriyoni.
The Center for Disease Control and Prevention inoshuma kuti mudzanga kusvuta kunokonzera zvinopfuura 480,000 vafe gore negore munyika U.S.
Kusvuta ndiko kukonzera vakurumidze kufa.
Kufuta uye vakafutisa kunogona kuva chikonzero pangozi yokubatwa zvimwe zvirwere uye zvirwere zvakadai: chirwere chemoyo, mhando 2 chirwere cheshuga, vamwe kenza uye BP.
asi, pane akanaka. Kunyange tisingagoni nguva dzose kudzora nhaka zvinhu, dambudziko, kana achida kuti Chocolate, pane matanho zvinoshingaira atingatora kuriritira utano hwakanaka.
Heunoi Nei tichifanira...
1. utano hwakanaka anotibvumira kuwana ukama hwakanaka. The nani tinonzwa, nani kwacho kuri kwedu, (yemanyorero), izvo zvinoita kuti tive nerujeko kuva kumativi uye kushamwaridzana. Wakamborwara kumativi munhu kuchingobvambura akanyunyuta pamusoro marwadzo? Kana ndiani vanoridza pako nokuti nguva dzose tsamwa? It inonyatsokwanisa kuisa damper pamusoro mafaro chinhu.
2. utano hwakanaka hunoita kuti nani figa, simba, uye simba. Kunoita kuti tiite mumuviri mabasa pasina kurambidzwa uye zvausingakwanisi.
3. utano hwakanaka anotibvumira kuti yakazvimirira, uye kwete zvinoda vamwe (kana zvimwewo zvinoitika) zvatinoda kutarisirwa nezuva; zvinoratidza nehanya nevaya isu hanya.
4. utano hwakanaka anopa hurefu zvikuru uye huri nani muupenyu.
5. utano hwakanaka anoponesa mari. Ndizvozvo. Inogona kudzivisa nemishonga inodhura, ishandiswe kugara yachiremba kushanyirwa, uye yakakwirira inishuwarenzi premiums.
6. utano hwakanaka kunonatsiridza chitarisiko. Funga musikana pamwe anopenya ganda, ari mhete pamwe rongedza matanhatu, uye vaya vane nhamba dzakanaka kuti kuvabvumira kutarisa zvikuru chero zvipfeko twavanopfeka. "Paunotarira zvakanaka, unonzwa zvakanaka. "
Tichifunga izvi, heano nyore shoma, nokukurumidza mazano, nokuti refu wokuchinja uye Zvakanyanya Kunaka Panguva utano.
Tora matanho zvishoma. Kufanana nezvimwe zvinhu zvakawanda muupenyu, zvishoma nezvishoma kusvika zvakanaka. Tanga nokutaura unoparadza michero nemiriwo yakawanda rimwe zuva uye kudya zvine mwero.
Kana uchisvuta, siya.
Havadi muviri? Funga inotsiva. Semuyenzaniso, Ndinofarira kutamba. Ko munoziva kuti kutamba inewo kunonakidza nzira kupisa macalorie uye kugara chimiro? Funga kutora Zumba kirasi kwaunogara. Kana zvichida Bowling kana swimming zvaizova zvakawanda nezvaanoda yako. Chinhu zviri nani kupfuura chinhu.
Kunwa mvura yakawanda. Zvakanaka kuti ganda uye flushes panze netsvina.
Get zororo yakakwana. Nyanzvi vanokurudzira maawa anenge masere usiku hwoga hwoga.
Varidzi chipfuwo. Zvidzidzo Health dzinoratidza kuti kuva mumwe anopa siyana zvinobatsira utano uye inopa pfungwa ushamwari.
Chipo chikuru chaunogona kupa pachako uye mudiwa wako utano hwakanaka– mupfungwa, mupfungwa uye mumuviri.
chitsamba: Aya mashoko asina chinangwa chinzvimbo kwachiremba wako utano kutarisirwa kwounyanzvi. Ona chiremba wako apo zvinoshanda.
7 Totally Unique Ideas For A Date
How To Nomumwe Nepo Cumview
Top US Cities nokuda Single Women